Moscow Sheremetyevo Inonzi Inonyanya Kubvuma Airport muEurope
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Moscow Sheremetyevo Inonzi Inonyanya Kubvuma Airport muEurope
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Sheremetyevo ndiyo yaive nhandare yekutanga muRussia kugadzira nekushandisa hurongwa hwekubata sarudzo pamwe nendege, ichishandisa dhatabhesi yayo yeSynchron.
Sheremetyevo iri pakati peTop 5 yendege hubs muEurope.
Sheremetyevo ndiyo hombe nendege yeRussia maererano nevatakuri uye traffic cargo.
Muna 2020, Sheremetyevo akashandira 19 mamirioni 784 zviuru zvevatakuri.
Moscow's Sheremetyevo International Airport yakazivikanwa sendege rinonyanya kubata nguva muEurope uye yechipiri inobata nguva zvakanyanya pasi rose muchikamu cheGlobal Airports.
Nekuda kwekushanda pamwe chete pakati pendege, ndege nendege-dzinodzora manejimendi, iyo Sheremetyevo aerodrome yakachengetedza huremu hwepamusoro uye yakaona yakakwira nguva yekubata nguva kwendege. Sheremetyevo ndiyo yaive nhandare yekutanga muRussia kugadzira nekushandisa hurongwa hwekubata sarudzo pamwe nendege, ichishandisa dhatabhesi yayo yeSynchron.
Vanotakura nguva zvakanyanya mumhepo kuSheremetyevo muna Chivabvu naJune 2021, zvichibva pakumhara, kusimuka kubva munzvimbo yekupaka nekutora, vaive:
Ndege dzekuEurope nendege dzinopfuura mazana maviri dzevapfuuri:
Ndege dzeEuropean dzine isingasviki mazana maviri ekufambisa ndege:
Ndege dzinopfuura mazana mashanu nendege dzendege:
Ndege dzine ndege isingasviki mazana mashanu yekutakura zvinhu: